I-Green House - I-Airbnb
Taketoyo, Chita District, Aichi, i-Japan
Indawo yami iphakathi kwedolobha namaphandle ongafinyelela kukho kokubili kalula. I-Peninsula yaseChita inazo zonke izinhlobo zotshwala zesithako esibalulekile saseJapan futhi lokhu kwenza iNagoya yaduma ngokudla eJapan. Ungaba nemisebenzi ehlukene ngesizini ehlukene lapha. Entwasahlobo, sinemikhosi yendabuko ngezimpelasonto. Ehlobo, zicwilise olwandle futhi ujabulele ukugeza kwe-Onsen (intwasahlobo eshisayo) ebusika. Kukhona imakethe yasemgwaqweni (ukudla nemisebenzi yezandla) kanye nezimbali eziqhakaza ekwindla.
Yonke le ndlu ngeyokuqashwa futhi ilungele umndeni noma abangani uma ungathanda ubumfihlo obuningi, noma ukusingatha amaphathi amakhulu ngaphandle kokukhathazeka kakhulu ngamazinga omsindo. Isitayela semvelo esinokukhanya kokhuni nokuhlobisa okuluhlaza. Kukhona nesethi enkulu ye-jenga eyenziwe ngezandla.
Igumbi elikhulu liza nendawo yekhishi. Intengo ingeyegumbi, hhayi ngomuntu ngamunye. Le condominium inegumbi elingeziwe lokusebenzisa abantu abangaphezu kwabangu-4 abanezindleko ezengeziwe. Nakuba zingekho izithombe eziveziwe, kukhona netafula lokudlela nesiqandisi ekamelweni elikhulu. Sicela uzizwe ukhululekile ukusebenzisa zonke izitsha ezinikeziwe. Uma uhlose ukupheka kakhulu, kunezitolo ezinkulu ezimbili eduze kwesiteshi esilandelayo, i-Chita-Taketoyo.
Ngicela uzenze ekhaya.
Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2, Umbhede ongu-1, Umbhede wengane e-1
4.72 · 226 okushiwo abanye
Indawo yethu iyindawo ephephile, ezolile futhi enokuthula. Kunezindawo zokudlela ezimbili (indawo yokudlela yaseSushi nendawo yokudlela yaseJapan) eduze kwendlu yethu. Zombili izindawo zokudlela zihamba ibanga ukusuka endlini yethu futhi zombili zihlinzeka ngemenyu yesiNgisi. Uma ufuna indawo yokudlela enhle, ikhefi, indawo yokubhaka, nokunye, sinezincomo eziningi ngawe. Ngenxa yokuvinjelwa kusayithi le-Airbnb, asikwazi ukulayisha noma yisiphi isixhumanisi lapha kodwa wamukelekile kakhulu ukuthi usicele umhlahlandlela wendawo yokudlela ngemva kokubhukha igumbi.
Kukhona isitolo sezinto ezi-2, i-Welcia (evulwa kuze kube ngu-12am) kanye ne-family mart (24hr). Ungakwazi ukuxhuma i-Wifi lapho. Ungathenga ukudla, izimpahla zansuku zonke, izinto eziningi ozidingayo ukuze uhlale ziyatholakala.
Uma ufisa ukuya esitolo esikhulu esinegrosari, izimonyo, izingubo, izikhwama noma yonke into, ungathatha isitimela esiya esiteshini saseChitataketoyo (isiteshi esisodwa kude nesiteshi saseFuki). Kukhona isitolo se-Mega-donke (uhambo lwamaminithi angu-3 ukusuka esiteshini) okuyisitolo esinesaphulelo sesitezi sokuqala futhi esitezi sesi-2 sithandwa yintsha yase-Japan. Konke okudingayo kuyatholakala lapho. Kukhona nesitolo sokudla iTak 21 eduze kwesiteshi.
Kukhona ichweba lezikebhe 5 min. kude nendawo yethu. Kuhle ukuhambahamba lapho.
Uma ufuna ukuhlanganyela nathi, sijabule kakhulu ukujoyina nawe! Sinemisebenzi embalwa ongakhetha kuyo.
*Ukupheka kwaseJapan (1000yen umuntu ngamunye)
Ngingalungisa izinhlobo ezimbalwa zezitsha zaseJapan ngokuya ngesicelo sakho sokudla. Ungafunda ukupheka!
*Hookah Sheesha (1000 yen ibhodlela ngalinye)
Ungajabulela izinhlobonhlobo ze-hookah noma izingxube ze-Sheesha ekamelweni elikhethekile lokuphola elinosofa. Iza ngezinhlobonhlobo zokunambitheka, njengesithelo, uswidi noma i-minty! Ibhodlela ngalinye lihlala amahora angu-1.5, futhi labelwa kangcono nabangani!
*Ukufundwa kweTarot (imizuzu eyi-15 ye-yen eyi-1500)
Uma ungathanda ukwazi okwedlule noma ikusasa lakho, ungenza isicelo kulo msebenzi kusenesikhathi. Ungesabi ukuthola, kungase kukuholele enye indlela ongazange uyicabange noma ikuxwayise ngokuthi umzila owufunayo awukulungele.